I-ArchiCAD, isoftware yasimahla ye-CAD yabafundi kunye nootitshala-iGeofumadas
Ikhaya/ArchiCAD/I-ArchiCAD, isofthiwe ye-CAD yamahhala yabafundi kunye nootitshala
I-ArchiCAD iyiqonga le-CAD eliye kwithengisa ixesha elide, nangona ekuqaleni kwakuyi-Mac version, bekuyi-1987 ukuba i-3.1 yaziwa.
Ukuba uyakhumbula, i-ArchiCAD 3.1 yayisele ikhuphisana ne-AutoCAD 2.6 ngo-1987, kanye njengeDathaCAD kunye neDrawBase, kodwa yiminyaka yayo edlulileyo eyenze ukuba ithandwe kakhulu. Makhe sibone ezinye zezibonelelo zayo:
Ikhululekile kubafundi nootitshala
Esi sicwangciso sesinye sezona zinoburhalarhume ezisungulwe yile nkqubo, kuba ukuyikhuphela kufuna ubhaliso kuphela, emva koko ikuthumelela iphasiwedi yexeshana ekufuneka uyiqinisekisile inyanga nenyanga. Emva konyaka kufuneka uvuselele iphasiwedi, kodwa ukuba nje ucinga ukuba ungumyaleli okanye umfundi ungayisebenzisa kwaye uqhelane nokuxhomekeka kuyo, ukuba awukhathali kukuba iiprojekthi ezivelisiweyo zine logo yeGrafisoft kwikona enye.
Ifumaneka kwi-Mac ne-PC
Kulolu hlobo, i-ArchiCAD iye yahlala yamukelwa kakuhle ngabasebenzisi base Mac, emva koko AutoCAD wayishiya iMac ngo-1993 kunye neMicrostation ngo-1995. i-ArchiCAD ivumela ukusebenza nge-DWG, DXF, IFC kunye ne-Sketchup iifayile kunye nezinto ezinokuphuhliswa phantsi koLwimi lweeNkcazo zeJometri (GDL)
Ukutshintshela kumgangatho oqhelekileyo
Ukusukela ekuqaleni u-ArchiCAD wayenethuba elithile, njengoko sisixhobo esijolise kwinto, hayi i-vector. Kucacile ukuba yayiyeyentengiso ye-Architecture kunye nezoKwakha, ngokungafaniyo ne-AutoCAD eyayisisixhobo sokuzoba ngokubanzi. Oku kumnike inqanaba elithile lokuxhamla, xa i-AutoDesk ifumene i-Arhente yoyilo lweDesktop ye-ArchiCAD sele ikhulile kakhulu. Ngeendlela ezintsha iArciCAD iye yaqhelana nomxholo BIM (Ukwakhiwa kweeNkcukacha zokwakha), phantsi kwelungelo lokwakha lobunikazi lokuhlala kwiindlela zamanye amazwe zesoftware ye-AEC. Ukubaluleka kwalo mgaqo kukuba amaqonga aphuhlisa usetyenziso olukhethekileyo anokulungelelaniswa ngokulula nomhlaba wobugcisa kunye nobunjineli, ke umba wokushicilela, ukuvelisa ukusika, ukujonga kunye nokulinganisa akunobunzima.
Ukuxhatshazwa ngeendawo ezahlukeneyo
CYPE, I-ArchiCAD inxulumene nalezi zicelo ezizodwa zoyilo lwezakhiwo zobunjineli kwizakhiwo (izakhiwo kunye nokufakelwa), ukwenzela ukuba ifikeleleke phakathi kwamaqonga amabini ngamafomathi eFC.
Archimedes, Esi sikhokelo senkxaso-sicelo kwi-quantification yemisebenzi kunye nokuhlanganiswa kweendleko; I-ArchiCAD ivumela uxhumano lwe-bidirectional kunye ne-Archimedes.
Umhlaba ka-Google, Nge-ArchiCAD ungakwazi ukusebenzisana ne-Google Earth Warehouse, kungekhona nje ukulayisha ii models uze uzibonise njengezakhiwo ze-3D kodwa ungenise idatha evela kwi-Google Earth.
SketchupEli liqonga uGoogle alifumeneyo, kwaye lisetyenziselwa ukumodelwa kwe3D kunenzuzo yokuba kube lula kakhulu ukwenza isiketshi sokuqala; kwimizuzu embalwa unokusebenza kwimbono entsonkothileyo enencasa elungileyo. Ngokusebenzisa iplagi ye-ArchiCAD yeSketcup, ungafumana umsebenzi owenziwe eSketchup kwaye oku kuyaziwa phantsi kwemodeli yokwakha eyi-smart.
MaxonForm kunye noAtlantisR, Ukudityaniswa kwe-ArchiCAD kunye nobu buchwepheshe kukuvumela ukuba wenze imodeli, uhlele kwaye unikeze izinto eziyinkimbinkimbi okanye ezingezizo ezemveli kuyilo lwendalo lwezakhiwo; ukuba "cofa kube kanye" kukunika iziphumo ezingcono.
I-IDER NE-CALENER VYP, Ngefom ye-cte, ukuxhumeka kwe-ArchiCAD kungenziwa, ukunikezela izinto kunye nepropati kwizinto ezivelisayo kwaye ngale ndlela zizuze ezi zicelo ezizodwa ekusebenzeni kwamandla.
Apha unako ukukhuphela i-ArchiCAD
I-ArchiCAD iya kuba nomboniso kwi-International Architecture Fair ezobanjelwa kwiSikolo sePolytechnic ngoFebruwari.
Inkundla yoLuntu loMbutho
Iimephu zeGoogle, kwinqanaba lesine
Yenza i-imeyli ye-imeyli ეს არის ვებგვერდზე
u-victor hugo uthi:
Kulungile, bendibukele ezinye izifundo zevidiyo zale nkqubo ye-ArchiCAD, yiyo loo nto ndinomdla kwinkqubo ethethiweyo, ndingayikhuphela njani?
B. Ikhatywayo uthi:
Kwiminyaka emininzi ndandingumsebenzisi weDeskithophu yeDeskithophu, ndicinga ukuba ndaqala nge-AAD 2000 eyayisekelwe kwi-Autocad R14. Xa ndaqala ukuba ne-ArchiCAD ndafaka izandla zam ndicinga ukuba ihlabathi liguquliwe. Ungaphinda usebenzise i-Desktographic Desktop, nangona ndiyazi ukuba amaxesha okugqibela ndambona esebenzisa ndicinga ukuba uye waphucula kakhulu, i-ArchiCAD isele iphumelele.
URamiro Pinto uthi:
Ndiyakunomdla kwi-archicad program ye mac
Ewe, ndinamathala eencwadi kwaye xa ndiwabeka kumathathu kuwo, icwangcisa ngokuzenzekelayo ukuba ndingayisombulula njani na ukuba amathala eencwadi ayahambelana ne-archicad eyisebenzisayo kunye nendlela eyisombulula ngayo le nto kuba ifuna inguqulelo ye-2.6 ekufuneka ndiyenze. gcina kolu guqulelo kunye nendlela endiyenza ngayo ukusombulula oku ukuza komyalezo ukuba uwusombulula njani iliso lokuba iwindow yam ilungile ngoku ukuba inkqubo ayilunganga kungenxa yokuba ayilwanga kakuhle umbulelo kwaye ubeke ingqalelo kule ngqalelo kuba apha iphatha ngaphezulu. ngaphezu kwamakhulu amabini abafundi kwidyunivesithi yezokwakha kwaye akuyi kuba kuhle ukucebisa ukuba inkqubo ye-wl iya kuba yinto ebandakanyekayo.
Ewe, kufuneka uyivule ngenkqubo ye-GIS (inokuba yi-Manifold, ArcGIS okanye imephu ye-AutoCAD), emva koko uyabele inkqubo yolungelelwaniso. I-Google Earth ifuna ukuba unikeze ulungelelwaniso lwejografi kunye nedatum ye-WGS84 kuyo.
Emva kokuba i-projection ibelwe, ifayile igcinwa kwifomati ye-kml, kwaye inokuboniswa yi-google yomhlaba.
En esi sithuba senza ngokusebenzisa i-dwg kunye neentlobo ezininzi
RODRIGO CASTRO uthi:
Umbuzo omnye nceda, ndiyifaka njani ifayile ye-autocad polygon ekwi-utm coordinates kwi-ggogle earth?Ndiza kuyivuyela impendulo yakho, enkosi kakhulu.
UDarwin, uyakubona le sithuba, apho kukho isicelo kwi-Excel ukuguqula izilungiso ze-UTM ukuya kwiiGographic
Ndiyanitshela ukuba ndifuna inkqubo yokuguqula i-UTM kwi-GEOGrics
jose emilio rivas ramirez uthi:
ulwazi oluhle kakhulu, mbulela